मन्त्री बस्नेतको मातृप्रेम र संर्घष : दिनभर अल्मलिन्थे तर रात परेपछि रुन्थे (भिडियाे) « News24 : Premium News Channel
मन्त्री बस्नेतको मातृप्रेम र संर्घष : दिनभर अल्मलिन्थे तर रात परेपछि रुन्थे (भिडियाे)
धर्म कुमारी शाह बस्नेत । सफल र भाग्यमानी आमा, जसले आफ्नै सन्तानको खुशीमा रमाउन पाईन् । सन्तानको दुःखका क्षणमा कहिले काँधमा जिम्मेवारी बोकेर जिन्दगी कै कठिन यात्रा गर्न बाध्य भईन, कहिले सुखमा सन्तानसंगै रमाउन । आफ्नी आमासंग विताउदाको पलहरु यस्तो छ उनमा ।
आमा लक्ष्मी शाहको कोखबाट जाजरकोट जन्मिएकी धर्मकुमारी शाह बस्नेतले वि.स २००२ सालमा यस चराचर जगतमा पाइला टेकेकी थिइन् । बुबा आमा पढेलेखेको, पश्चिम नेपालको ठकुरी परिवारमा जन्मिएकी धर्म कुमारी शाह बस्नेतलाई कुनै अभाव तथा छोरी भएकै कारण आफ्ना लक्ष्य प्राप्तिको लागि कुनै पनि रोकटोक भएन ।
पढेलेखेको परिवार भएको कारण बुबा आमाको प्रोत्साहन सधैभरी छोरी पढ भन्ने भए पनि धर्मकुमारीको मन भने खेल्नमा बढी गयो । विद्यायलको यात्रामा सामान्य कखरा बाहेक खासै नपढेकी धर्मकुमारीको सोचाइ भने अन्य मानिसको भन्दा फरक थियो । समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परिवर्तनकारी सोच भएकी धर्मकुमारी सफल गृहणी र अभिभावक मात्रै बने पनि आफुमाथि गर्व गर्छिन ।
सानैदेखि शालिन, भद्र सोच भएकी धर्मकुमारीको आमाको माइती बझाङ थियो । ठकुरीको घर र त्यो समयमा ठकुरी परिवार भित्र एक खालको तानाशाह व्यवस्था भए पनि उनकी आमाले पनि बुहारी भएर घर आउँदा समेत त्यस्तो दुःख झेल्नु परेन । माइती र घर नजिकै भएकी धर्मकुमारीले २०१४ सालमा जाजरकोटको काले गाँउमा बस्नेत परिवारसंग लनगाठो कसेकी थिइन । आमाबुबा जस्तो महान र ठूलो कोही छैन भन्ने धर्मकुमारीलाई कहिले केही कुराको अभाव नै भएन ।
एउटै गाँउमा बस्दा बस्दै सोही गाँउको दण्डवीर बस्नेतसंग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । तत्कालीन समयमा आमाबुबाको इच्छा विपरित अन्तजातीय विवाह गरेकी धर्मकुमारीले २०१५ सालमा पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन् । सामाजिक परिधिमा नै रहेर पनि समाज परिवर्तनको लागि विद्रोह गर्ने हिम्मत गरेकी धर्मकुमारीलाई अन्र्तजातीय विवाहको कारण माइतीमा समस्या पनि आयो तर उनले त्यसलाई पनि सहजै स्वीकार गरिन । ८ ओटा सन्तानलाई जन्म दिएकी धर्मकुमारीको २ सन्तान भने जीवित रहन सकेनन् ।
नजान्दा नै परिवर्तनको अभ्यासमा लागेकी तिनै ममताकी खानी आमा,धर्मकुमारी शाह बस्नेत अर्थात वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतकी आमा । मन्त्री बस्नेतको ठम्याईमा आमा श्रृष्टिकी मुहान , परिवारको सुरुवातको मुहान हुन ।
वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको मातृप्रेम र संर्घष
मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत । राजनीतिक क्षेत्रमा एक सम्भावना बोकेका युवा । वि. सं. २०२८ साल बैसाख १ गते जाजरकोटको काले गाँउमा कान्छा सन्तानको रुपमा जन्मिएका बस्नेत असल विद्यार्थी, असल अभिभावक र असल सन्तान पनि हुन् । राजनीतिक माहोलमा जन्मिएका उनी आफै कतिबेला राजनीतिमा प्रवेश गरे भन्ने कुराको समेत पत्तो पाउदैनन् ।
तत्कालीन राप्रपाको माहोल घरमा भएपनि विद्रोह गरेरै समाज परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरेर तत्कालीन माओवादीको विद्रोहमा होमिएका शक्ति बस्नेतको राजनीतिक यात्रा २०४६/४७ बाट सुरु भएको हो ।
तत्कालीन एकीकृत माओवादीमा ०५५ मा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य ०५७ मा पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र ०५७ मा पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भएका शक्ति २ पटक सांसद र ३ पटक मन्त्री समेत हुन सफल भए । अध्ययनमा समेत निक्कै अब्बल बस्नेत विश्वविद्यालयको पढाई छाडेर राजनीतिक दौडधुपमा लागेका थिए । सरल स्वभावका बस्नेत अआफ्नै गाँउ ठाँउको परिवेश र किताबमा उल्लेख भएका धरातलको फरकपनले नै राजनीतिमा होमिएका थिए ।
तत्कालीन माओवादीमा होमिदा परिवारमा एक किसिमको यो राजनीतिमा नै जाने भए पनि यो पार्टीमा नगैदिए हुन्थ्यो भन्ने वातावरण भए पनि मन्त्री बस्नेतको इच्छाशक्तिका अगाडि परिवारले सहयोग गर्ने बाहेक अन्य केही गरेनन् ।
केही वर्ष अगाडिबाटै राजनीतिमा लागेको भए पनि घरमा आमा बुबाले भने ०५१ सालमा मात्रै थाहा पाएका थिए । कान्छो सन्तान सधैभरी आँखा अगाडि आउने प्यारो सन्तान शक्ति बस्नेत २०५२÷०५३ सालपछिको भुमिगत जीवनमा पनि आमालाई भेट्न बेला बखत आइरहन्थ्ये । सन्तानको माया कस्लाई हुदैन र त्यसमाथि छोरो भुमिगत भएपछि दिनभर घरको काम गर्ने र रातभर रुएर काट्ने गरिने धर्मकुमारीले । कतिबेला के सुनिने हो, भन्ने पीरले १२ वर्षे द्धन्दको त्यो समयमा कयौँ रात रोएर नै विताइन । परिवारको माया भन्दा पनि देशको आवश्यकतालाई बुझेका शक्तिले आफ्ना परिवारलाई सम्झाई बुझाई गरेर आमाको आँखाको आँशु समेत पुछ्न सफल भए ।
जनयुद्धको उत्कर्षमा अर्थात २०५३ सालमा नै उनले सहयात्री सत्या पहाडीसंग विवाह गरे । सत्या डोल्पाबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी पूर्व मन्त्री पनि हुन् । शक्ति स्वयम पनि ५४ सालमा एक सन्ताको पिता बन्न पुगे । करिब डेढ वर्ष जंगलमा आफु संगै राखेर थप सुरक्षा र स्याहारको लागि अरुको हातमा आफ्ना सन्तान घर पठाएका शक्तिले । त्यसपछि उनको पनि सन्तान हुर्काउने जिम्मेवारी आमा धर्मकुमारीमाथि थपिएको थियो । नातिनी समेत जन्मिएपछि बुहारी जेल पर्दाको कठिन समय धर्मकुमारीका लागि एक नमिठो सपना झैँ लाग्छ । एकातिर सानो नातिनी अर्कोतिर बुहारी जेल चलान ।
शान्ति वार्ता भएपछि समय क्रमसंगै २०६८ सालको मन्त्री मण्डलमा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बस्नेतले त्यतिबेला फोनबाट नै आमाको आर्शीवाद लिएका थिए । आफ्ना छोराको प्रगतिमा खुशी लागेको बताउने धर्मकुमारीले छोरालाई भनेकी थिइन ‘मेरा लागि सबै छ, खुशी छु, यिनीहरुले गाँउ बनाउनु पर्छ, आफ्नो जिल्लाको विकास गर्नुपर्छ ।’ आफै पनि कहिले काँही गाँउमा फोन गरेर गाँउको हालचाल बुझ्ने काम धर्म कुमारीले गर्दै आएकी छिन् । सन्तानको प्रगति देख्दा पहिलाको सबै दुःख भुलिदो रहेछ, सन्तानको प्रगतिले आफ्नो छाती चौडा भएको पनि धर्मकुमारीको भनाइ छ ।
आफ्नो यात्रामा आमा र परिवारबाट कुनै अवरोध नहुनु शक्तिका लागि वास्तवमा यो स्थानसम्म आइपुग्ने पहिलो प्रेरणादायी खुड्किलो बन्यो । पिता खम्बजंग बस्नेत जहिले पनि आफ्नै काममा व्यस्त रहनु , आमा धर्मकुमारी घरधन्दामा नै अल्झिरहनु , जेठो दाई शिक्षण पेशामा सक्रिय रहनु र माइला दाई स्थानीय राजनीतिमा पकड बढाउदै अघि बढिरहेको अवस्थामा शक्तिका लागि आफ्नो लक्ष्यका सबै पाइला साफ झै थिए ।
आफ्ना सन्तानको सफलता हरेक आमाको सपना पनि हो । त्यसमाथि छोराले देशकै मन्त्री भएर देशविकासको अभिभारा अंगाल्न पाउँदा ति आमाहरुको मन कति पग्लदो हो ? यस्तै भएको छ यिनै ममतामयी आमा धर्मकुमारीलाई । राष्ट्रकै लागि एक योग्य नागरिक जन्माउने आमा धर्मकुमारीलाई हाम्रो नमन । देश अझै संक्रमणमा छ, धेरै परिवर्तन अझै आवश्यक छ ।